Yenza izindululo zeshishini kwisishwankathelo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Isishwankathelo okanye isishwankathelo luxwebhu olusebenzayo phuhlisa isindululo sokuqala Inkcazo yeprojekthi esifuna ukuyifeza. Zonke iinkampani zisebenzisa olu xwebhu njengenyathelo lokuqala ekunikezeleni umbono.
Inemisebenzi emibini ephambili. A Umsebenzi weqhinga Ukuchaza iprojekthi ekufuneka yenziwe. Omnye umsebenzi kukuvumelana kunye ukwabelana ngolwazi zombini nomthengi kunye neqela lomsebenzi.
Ukuchaza iprojekthi ngesiqhelo kuqala ngokuchonga ingxaki eza kusonjululwa. Njengoko iprojekthi iqhubeka, kuyinto eqhelekileyo ukuba umxholo wenkcazo uhlengahlengiswe.
1 Iziqulatho kunye nolwakhiwo
2 Ezona njongo ziphambili zokwazisa
Iziqulatho kunye nolwakhiwo
Ukhuphiswano / ixabiso lesindululo
Izithintelo (ezobugcisa nezeshishini)
Ubume benkcazo bungaguqulwa kwaye buhlengahlengiswe kwiprojekthi nganye. Unokukhetha iindawo ezikulungeleyo, kodwa khumbula ukuba ukugqibezela ngcono kulunge. Sinokongeza amanye amanqaku njengohlahlo-lwabiwo mali, ixesha lokuhambisa, phakathi kwezinye.
Ukuqala, kufuneka senze isishwankathelo, intshayelelo yeprojekthi eyenza inkcazo emfutshane (umhlathi omnye uya kwanela), uqhubeke neenjongo ekufuneka zifezekisiwe, izizathu kunye nemiba esifuna ukuyichaza.
Ezona njongo ziphambili zokwazisa
Kukho Iindidi ezimbini zeenjongo, Ezo zeshishini kunye nezomsebenzisi. Masiqale ngeenjongo zethu, ezo zeshishini. Kuya kufuneka sicacise isizathu seprojekthi kunye nokuba leliphi na icebo esililandelayo, kuba oku kuyasivumela ukuba sikhokele izigqibo zoyilo malunga nayo.
Kwelinye icala, iinjongo zomsebenzisi zinokwahluka kancinane kwezethu. Iinjongo zabo, iimfuno, iminqweno kunye nokusikelwa umda kufuneka zicaciswe gca.
Ukuba sithetha amagama ewebhuKuya kufuneka sihlalutye amava omsebenzisi (UX), Oko kukuthi, misela iimfuno zabathengi kunye nokuziphatha kwabo phambi kwesiza.
Elinye inqaku eliza kuhlalutywa kukhuphiswano lwethu, siphande ngemeko yabo kwintengiso, amacebo abo kunye nokuba zeziphi izibonelelo zokukhuphisana okanye ixabiso lesindululo esinalo ngaphezulu kwabo. Uxwebhu olunye olugxile kukhuphiswano yile ukubekaSiza kuthetha ngayo ngokunzulu kwenye iposti. Njengoko besesitshilo ngaphambili, isindululo sexabiso lethu siya kuba sisitshixo sokuzahlula kwabanye. Kufuneka siqwalasele amandla ethu, kodwa kunye nemida yethu. Kuya kufuneka sivavanye kwaye sichonge ukuba ngaba kukho iikhonsepthi ezingenakuphuhliswa kwaye senze Iprojekthi eyiyo.
Okokugqibela, kuyathakazelisa ukumakisha ubungakanani beprojekthi, izinto eziphambili kuthi. Inqaku lokugqibela liya kuba luncedo olukhulu kuthi ukuba sigxile kwiinjongo zethu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Yenza izindululo zeshishini kwingcaciso
Ubugcisa beWest West nguMark Maggiori